प्रदेश ४ मा कम्युनिष्टलाई दही तर कांग्रेसलाई पानी नि छैन ! – MeroJilla.com
५ मिनेट समय पाएर रोस्टममा पुगेका सत्ता पक्षका सांसद विनोद केसीले आधी मिनेटमै सम्बोधन सके । उनले भने, ‘कोहीलाई भने दहीमा चिनी, कोहीलाई भने पानी नि नदिने…।’
प्रदेश ४ को बजेटमाथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसद सन्तुष्ट देखिएनन् । उखानटुक्का र नीतिकथाहरुको माध्यमबाट उनीहरुले आफ्ना असन्तुष्टि राखे । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले मंगलबार प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बुधबार छलफलमा भएको हो ।
सांसद इन्द्रधारा विष्टले सत्तापक्षको सांसद भएकाले वाध्यताले बजेटको समर्थन गरेको उल्लेख गरे । उनले गीतिलयमै भने, ‘छातीमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ । आफ्ना क्षेत्रका योजना छुट्दासमेत हुन्छ भन्नु र ढ्यापढ्याप पार्नु कम्ती दुःखको कुरो होइन ।’ इज्जत धान्नैलाई बजेट छरिएको हो कि भनी सांसद धनन्जय दवाडीले प्रश्न गरे ।
सांसद दीपक कोइरालाले सिंगै प्रदेशकै डिपिआर बनाउन सुझाव दिए । उनले प्रदेशले गर्नुपर्ने काम छुट्याउन पनि आग्रह गरे । ‘ठूला विकास, निर्माणदेखि व्यक्तिगत समस्या पनि प्रदेशले नै समाधान गरिदेओस् भन्ने देखियो,’ कोइरालाले भने ।
सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद आशा कोइरालाले महत्वका साथ किटान गरिएका योजना छुटेको तर सामान्य योजना भने परेको गुनासो गरिन् । उनले योजनाको वितरण आवश्यकताका आधारमा र समान रुपले हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद दिलमाया रोकामगर गौतमले पनि योजनाहरु दोहोरिएको र छुटेकाले परिमार्जन गर्न माग गरिन् ।
सांसद कृष्णबहादुर थापाले प्रदेश सरकारकै अस्तित्वमा प्रश्न उठेको समयमा गाउँगाउँ र सहर सहरमा पैसा र योजना पुग्नु ठूलो कुरा भएको बताए । उनले कास्कीमा बजेट केन्द्रित भयो भन्ने आरोपमा यथार्थ नरहेको दाबी गरे । ११ सांसद र प्रदेशको करिब २४ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने प्रदेश राजधानीसमेत रहेको कास्कीमा तुलनात्मक रुपमा बढी बजेट नरहेको बताए । सांसद मीना गुरुङले निर्माण क्षेत्रमा रहेका कमजोरी हटाउनेगरी काम गर्न आग्रह गरिन् । लागत निकै घटेर ठेक्का लिने र लिएपछि पनि गुन्डालाई पाल्नुपर्ने अवस्थाले निर्माण गुणस्तरीय हुन नसकेको उनले बताइन् ।
सांसद राजीव पहारीले बजेट निकै उत्कृष्ट रहेकाले पूर्ण समर्थन गर्छु भन्दा बैठकमा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो । उनले उखानमार्फत नै बजेट निर्माणका अप्ठ्यारा राखे । ‘टाउको छोपे खुट्टातिर देखिने, खुट्टा छोपे टाउको देखिने छोटो सिरकजस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले उत्कृष्ट काम गर्नुभो,’ पहारीले भने ।
प्रतिपक्षी सांसदहरुले बजेटले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदलाई विभेद गरेको गुनासो गरे । कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले सत्तापक्षले हामी अघाएपछि तिमीहरु खाऊ भन्ने रणनीति लिएको जिकिर गरे । उनले थपे, ‘कि चाकडी गर्नु पर्‍यो ? हामी मगन्ते हौं र ?’ सांसद मनकुमारी गुरुङले समानुपातिक सांसदलाई हेपिएको गुनासो गरिन् । उनले आक्रोश पोखिन्, ‘दुवैको हैसियत एउटै होइन र ? अबको चुनावमा समानुपातिक नै खारेज गरिदिए हुन्छ ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विपक्षीको कुरा नसुने संसदको गरिमा बाँच्न नसक्ने औंल्याए । सांसद बिन्दुकुमार थापाले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे ५ सय मिटर बढाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा संघसँग समन्वय गरी पहलकदमी लिन आग्रह गरे ।
सांसद ओमकला गौतमले आफ्नो हात, जगन्नाथ गरिएको जिकिर गरिन् । उनले बजेट जनताको करबाट बन्ने भएकाले कसैको पैत्तिक सम्पति बाडिएजस्तो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । सांसद कृष्ण थापाले कतिपय मन्त्रलाय अन्तर्गत बजेट विनियोजन नै नगरी एकमुष्ठ राखिएकोमा आपत्ति जनाए । अहिलेको बजेटलाई सांसद हरिशरण आचार्यले ‘नखाऊ भने दिनभरिको शिकार, खाऊ भने कान्छाबाको अनुहार’ उखानसँग तुलना गरे । उनले प्राथमिकतामा परेका योजना छुट्नु र कम महत्वका योजनामा बजेट पर्नु बुद्धिमतापूर्ण नहुने बताए ।
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बुधबार छलफल भएको हो । छलफलमा सांसदहरु ईन्द्रलाल सापकोटा, पियारी थापा, जुनादेवी नेपालीले पनि बोलेका थिए ।
बैठकले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले विधेयक विधायन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए ।
बुधबारकै प्रदेशसभा बैठकले खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद डोबाटे विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हेलचेक्रयाइँका कारण बेला बेलामा अप्रिय घटना हुनेगरेको स्मरण गरे । उनले आवश्यक योग्यताबिना खोप लगाउँदा ज्यान तलमाथि भए हुने सजाय बढाउन माग गरे ।
विधेयकमा आवश्यक योग्यता नभएकाले खोप लगाउँदा मृत्यु भएमा ५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ । सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले विधेयकले नेपालको विद्यमान स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको बताइन् ।
छलफलका क्रमममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको सामाजिक मामिला मन्त्री नरदेवी पुनले जवाफ दिइन् । उनले खोप उत्पादक देशले आफ्नै देशमा प्रयोग गरेका, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका खोपहरुमात्र प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान विधेयकमा रहेको प्रष्ट गरिन् ।samadhannews